Tresaka Archives - Page 106 sur 136 -
“Atsimo sy avaratra !”
28/04/2017 admintriatra 0
Mbola mitana ny sain’ny maro hatrany ny fihetsika fanaovana tsinontsinona ny Dokotera ataon’ny biraon’ny SMM noho ny raharaha Claudine. Ny tena marina dia mifanao “atsimo sy avaratra” mihitsy izany Dokotera sy Mpitsara izany. Ny voalohany, …Tohiny
“Mila seza !”
27/04/2017 admintriatra 0
Inona no tsy nilazan’i Doudou hatrany am-boalohany hoe “mila seza” dia vita ny resaka, tsy nilàna ireny fanambarana sy fitarihana olona hidina an-dalambe ireny? Azony natao tsara ny nifampiresaka tany ambadika tany hoe “mila seza” …Tohiny
“Hita maso !”
26/04/2017 admintriatra 0
Milaza miara-mahita isika fa tena malalaka tokoa ny asa fanaovan-gazety sy ny fanehoan-kevitra amin’izao fotoana. Indraindray aza tafahoatra mba tsy ilazana hoe tsy rariny intsony ny zavatra mivoaka amin’ny gazety sy heno amin’ny hainoamanjery. “Hita …Tohiny
25/04/2017 admintriatra 0
Mihanaka ao Mahanoro araka ny vaovao navoakan’ny gazety tsy miankina iray ny vola sandoka 10 000 Ar. Fa angaha misy “may volon-tratra” any ambadika any e? Aiza ny solombavambahoaka voafidy tao Mahanoro amin’izao zava-mitranga any …Tohiny